आदिवासी जानजाति -ह्योल्मो
को हुन् ह्योल्मो / योल्मोपा ?
नेपालका ५९ आदिवासीहरूमध्ये ह्योल्मो वा योल्मो जाति सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाको उच्च पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने एक जाति हो । उनीहरू आफूलाई योल्मोपा भनेर चिनिन रुचाउँछन् । योल्मोपा जाति बौद्ध मार्गी विशेषतः महायानी सम्प्रदायका हुन् । योल्मो शब्दको उत्पत्ति ह्योल्मोबाट नै भएको भन्ने भनाई छ । ह्योलको अर्थ हिमालले परिपरि घेरेको र मो को अर्थ देवी भन्ने हुन्छ । अर्थात् ज्योमो याङरी देवीले संरक्षण गरेको ठाउँ र त्यहाँ बसोबास गर्ने समुदाय नै योल्मोपा भएको विश्वास छ । त्यसैले योल्मो क्षेत्र योल्मोपालगायत सम्पूर्ण बौद्ध मार्गीहरूको पवित्र तीर्थस्थलका रूपमा पनि लिइन्छ । साथै, यस क्षेत्रलाई अन्य दोर्जे लेग्पा, छिरिङ चेङा, गेङेन लेरु, ज्योवो छ्यती तथा टासी छिरिङमा देवीहरूले पनि संरक्षण गरिरहेको योल्मोपाहरूको जनविश्वास छ ।
यस जातिको मौलिक संस्कृति तथा रहनसहन रहेको छ । १४औं शताब्दीभन्दा अघिका ऐतिहासिक प्रमाणअनुसार राजाहरूले योल्मोका प्रमुख लामाहरूलाई सम्मान स्वरूप गुम्बा बनाई भोगचलनका लागि दिएका पाइन्छ । यस्तै, जग्गा, जंगल तथा खेतहरू दिएको प्रमाणका रूपमा योल्मोको पुरानो गुम्बा चिरी, गोछाङ्गलिङ्ग, मिलिम्क्षिम, तार्केग्याङ, ग्याङयुल, ताहोङसा आदि गाउँका गुम्बाहरूमा रहेका सनकपत्र, ताम्रपत्र छन् । यी सबै गुम्बाहरू अहिले राजगुठीको रूपमा रहेका छन् । योल्मोपा आदिवासीको संस्कृति, परम्परा, धर्म र रीतिरिवाज युल्ठिम प्रणालीअनुरूप चलिआएको छ । योल्मोपाहरू वर्षभरि नै विभिन्न चाडपर्वहरू मनाउँछन् र पूजापाठहरू गरिरहन्छन् । वि.सं. २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा तामाङहरूकोे जनसङ्ख्या १०,७५२ रहेको देखाएको छ ।
योल्मोपाहरूको सबैभन्दा ठूलो चाड सोनम लोसार हो । योल्मोपाहरूको हकअधिकार संरक्षणका लागि २०४७ सालदेखि नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघको स्थापना भएको छ । यसले योल्मोपाहरूको हक र हितको रक्षाका लागि कार्य गर्दै आएको छ । योल्मोपाहरूले बोल्ने भाषालाई ह्योल्मो वा योल्मो भाषा भनिन्छ । उनीहरू साम्बोटा लिपि प्रयोग गर्दछन् । ह्योल्मो समाज सेवा संघका अनुसार योल्मो भाषीहरू करिव १ लाख ५ हजार रहेको छ । यो भाषा नेपालको ११ वटा जिल्लामा बसोबास गर्ने योल्मोपाहरूले बोल्दै आएका छन् । यस्तै, नेपालबाहिर भारत, भुटानलगायत विभिन्न देशमा बसोबास गर्ने योल्मोपाहरूको बोल्दछन् ।
देश आदिवासी जानजाति